Izitimela ze-OBB zivame ukuhambela iVienna – Graz, Salzburg – Vienna, Linz – St. Polten, I-Graz - iSalzburg. Ungangena futhi emazweni angomakhelwane ngaphakathi kweYurophu usebenzisa izitimela ze-OBB.
1) Ufika eCity Center. Lokhu kungenye yezinzuzo zezitimela ze-OBB uma ziqhathaniswa nezindiza. Izitimela ze-OBB nakho konke okunye ukuhamba kwesitimela kusuka noma yikuphi edolobheni kuya enkabeni yedolobha elilandelayo. Kuyakongela isikhathi kanye nezindleko ze-cab kusuka esikhumulweni sezindiza ukuya enkabeni yedolobha. Ngezitimela, Kulula ukufika kunoma yiliphi idolobha oqonde kulo. Akukhathalekile ukuthi usukaphi, Munich, Salzburg, Linz, noma uCologne, Ukuma kwamaphakathi nedolobha kuyinzuzo enkulu yezitimela ze-OBB!
Asides from the ithikithi elijwayelekile nethikithi leKomfort, I-OBB inikezela olunye uhla lwamathikithi aziwa njengethikithi le-Sparschiene. Leli banga alishibhile futhi kubahambi abasebenza ibhajethi ephansi. Kunezinhlobo ezimbili zamathikithi eSparschiene.
Wena can bokulungile a ngiyazingesikhathi ngaphambili kwezasekhaya obb izitimela ze 3 euro. Wena kuthanda uthole okwakho isihlalo ngemuva kokubhuka.